မြန်မာရွှေ့ ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ ဆရာမများအစည်းအရုံး(BMTA) ၏ တတိယ အကြိမ်မြောက် အလုပ်အမှုဆောင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်	Posted on October 21, 2011	by bmta05 ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာရွှေ့ ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ ဆရာမများအစည်းအရုံး(BMTA) ၏
This entry was posted in ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်. Bookmark the permalink.	← World Teachers’ Day Ceremony and Migrant School Teachers’ Conference